स्वास्थ्यकर्मी शर्माको ‘‘नाचिहरन्छ कोही’’ बिमोचित् – Palpa Samachar
स्वास्थ्यकर्मी शर्माको ‘‘नाचिहरन्छ कोही’’ बिमोचित्
By palpa samachar	 On Jun 22, 2019
पाल्पा । स्वास्थ्यकर्मी रुक्मागत शर्माको दोस्रो साहित्यिक कृति ‘‘नाचिहरन्छ कोही’’ लघुकथा संग्रहको शनिवार तानसेनमा एक कार्यक्रमका बीच बिमोचिन गरिएको छ ।
बिगत ३३ वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा रहेका शर्माको उक्त कृतिको वरिष्ठ सञ्चारकर्मी एवम् साहित्यकार नवराज लम्सालले बिमोचन गरे । सो अवसरमा बोल्दै उनले उक्त लघुकथामा समाज मनोविज्ञान, सामाजिक बहुलता, सामाजिक जटिलता, नारी स्वतन्त्रता, प्रेम कुण्ठा, मानव अधिकार लगायतका विविध विषय समेटिएको बताए ।
‘वर्तमान नेपाली साहित्यिक सिर्जनामा मस्तिष्क बढी खेलेको र हृदय कम खेलेको भेटिन्छ’, लम्सालले भने, ‘साहित्यमा देश, भुगोल, जाति, संस्कृति लेखिएन भने नेपाली मौलिकता जोखिममा पर्दै जानेछ ।’ यौन, गाली, गरिवी मात्र नलेखेर कवि समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा लम्सालले जोड दिए ।
कृतिको समीक्षात्मक मन्तव्य राख्दै साहित्यकार पुष्कर आचार्यले मानवीय चिन्तन र सोंच अभिव्यक्त गर्न लघुकथा सफल भएको जनाए । उनले कृतिमा घट्नाको बैठानमा समस्या, शीर्षकको पुुनरावृत्ती, व्यवस्थापनमा केही प्राविधिक कमजोरी रहेको पनि औंल्याए । समीक्षक आचार्यले शर्माको कृति लघुकथा लेखनमा लाग्नेहरूका लागि उत्प्रेरक भएको भन्दै सर्जकले साहित्यको माध्यमबाट सामाजिक चरित्रको एक्सरे गरेको जनाए ।
तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाहीले लेखकका कृतिमा समाजका विम्ब झल्किने भएकाले कृतिकारमा परिपक्वता र निखारता झल्किनुपर्ने धारणा राखे । उनले व्यक्तिको विम्ब पनि कृतिले झल्काउने भएकोले मूलप्रवाहको लेखन र सामाजिक सचेतना जगाउने कृतिहरू लेखिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य राजनप्रसाद पन्त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष डुलबहादुर कुँवर, साहित्यकार मन गहिरे, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, औषधि व्यवसायी संघ ५ नं. प्रदेश अध्यक्ष शिव ज्ञवाली, नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका उपाध्यक्ष भरत शर्मा लगायतले शर्माको कृतिले नव सर्जकलाई लेखनमा उत्प्रेरणा जगाउने जनाए ।
धवल पुस्तकालयको प्रकाशन र साहित्यकार डा. शंकर गैरेको सम्पादन रहेको १३६ पृष्ठको कृतिमा ८० वटा लघुकथा संग्रहित छन् । धवल पुस्तकालयका अध्यक्ष युवराज पौड्यालको अध्यक्षता, सचिव टंक पन्थको स्वागत र महासचिव राजेशकुमार अर्यालको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
भुसलडाँडा माविका बिद्यार्थीलाई नेपाली सेनाले तालिम दियो
गरिव तथा जेहेन्दार बिद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति बितरण